UDUB OO U TAFFO XAYDAN SIDII AY LAALUUSH UGU KALA QAYBIN LAHAYD GOLAYAASHA %GUDIDA DOORASHADA | Toggaherer's Blog
« GARO DABA-DAY GII-GII LEH !!!!
TOGWAJAALE WAY EEDAY MAAMULKA RIYAALE , EE KA TASHADA AAYIHIIN »
UDUB OO U TAFFO XAYDAN SIDII AY LAALUUSH UGU KALA QAYBIN LAHAYD GOLAYAASHA %GUDIDA DOORASHADA
UDUB oo u taffo xaydan sidii ay laaluush ugu kala
qaybin lahayd golayaasha iyo gudida doorashada.
Xisbiga udub ee uu gudoomiyaha u yahay Madaxweynaha dalka Mr: Daahir Riyaale Kaahin ayaa mudadan dambe u taffo xaydan sidii uu cod ugaga heli lahaa shacbi weynaha Somaliland isagoo isticmaalaya xeeladaha cabsi gelin, khalkhal iyo walaac laga dhex abuuro bulshada, isku dhaca beelo iyadoo loola danleeyahay in laga dhigto marmarsiiyo in uu dagaal iyo abaari ka jirto dalka ah.
Xisbiga udub ayaa laaluush lacageed kula dhexmeeraya shacbiga siiba waxmagaratada iyo dadka ree miyiga ah. Waxay UDUB dirtaa booyado biyo ah oo loo gaynayo ree miyigii aan horeba maamulku danta uga lahayn. Macnaha arintan ayaa ah in ree miyiga iyo dadka aan siyaasada fahanka u lahayn ay marin habaabiso oo kaga hesho cod wakhtiga doorashada.
Waxa la abaabulayaa in dad laga soo daadgureeyo deegaanka itoobiya iyadoo la keenayo deegaanada beeraleyda oo dadkii beeraha lahaa lagu odhanayo dad ayaa ka codaynaya halka ka dibna way noqonayaan. Udub ayaa ku soo dhex deysay magaalooyinka waawayn rag dhalinyaro iyo waayeelba leh oo wada in ay shacbiga ku khuukhiyaan kulmiye ayaa nabada khalkhal ku haya iyo dhibaataa idinku soo socota oo libaaxyo gaajaysan ayaanu idinka haynaa.
Isla markaa dadkan u adeegaya UDUB ayaa laaluush badan ka qaatay dawlada isla markaana loo dhiibay hanti badan oo ay dadka ku kala laaluushaan. Hadaba maamulka ayaa ku andacoonaya in ree miyigii abaaro ku dheceen oo aanay joogin dalka sidaa darted aan la helayn dadkii codayn lahaa.
Xisbiga udub ee talada haya ayaa hadaba ku xisaabtamaya in shicibka magaalooyinka laaluush iyo idaacado, cabsi gelin khalkhal nabad lagu khuukhiyo looga helo cod isla markaana lagu kabo cod laga helo dad laga keeno itoobiya iyo ree miyi laaluush lagu siiyo biyo iyo lacagba oo aan siyaasada gorfeyn iyo aqoon u lahayn.
Waxa maamulku kolkaa dalbanayaa in doorashada dib loo dhigo iyagoo adeegsanaya gudiga doorashada oo laaluush badan la gudoonsiiyey isla markaana loo balan qaaday in jagooyin laga siinayo haday udub u hiiliyaan. Hadaba Gudiga doorashadu waa gudi madax banana oo ay ahayd in ay si xalaal ah u guttaan xilka umadu u dhiibatay isla markaana dhex u ahaadaan axsaabta qaranka oo dhan.
Waxa sharaf dhac iyo gef u ah gudiga doorashada in ay cid uga haybaystaan qabashada doorashada. Gudigu waxay ku khaldanyihiin in aanay cadayn u hayn sida loo isticmaalay dakhligii doorashada ee wakhtigii dhamaaday. Waxa gudigu ku khaldanyahay in aanay hayn dakhligii doorashada ee wakhtigan oo ay marmarsiiyo ka dhigtaan.
Hadaba, waxa haboon in gudiga doorashada laga xayuubiyo xilka lagu aaminay kol hadii ay gudan kari la’yihiin. Isla markaa waa in lala xisaabtamaa oo iyaga hantidooda guri iyo gaadiid loo xaraashaa dakhliga ay lunsadeen.
Isla markaa waxa haboon in madaxda Somaliland ee loo tuhunsanyahay in ay hantidii dalka musuqmaasuqeen waa in lala xisaabtamaa iyagana oo la geeyaa maxkamad caalami ah isla markaana laga diwaangeliyaa caalamka si aanay dalka uga baxsan oo loogu soo oogaa dacwado lagaga soo celinayo hantida umada ee ay boobeen. Iada oo waliba lagu samaynayo dabo-gal si loo ogaado dadka ay ku qorteen hantida ay boobeen ee u haya.
Qalinkii: Cabdilaahi obsiiye Habane. USA.